Text: Himamsi diraanii kamiyyuu kan ati ittiin yeroo shallaguu barbaadde haala kanaan "HH:MM:SS" ta'a.
Faankishinii gatii yeroo fayyadami gatii qeenxee kamiyyuu jijjiiruuf,kanaafuu addadummaa yeroo shallaguu dandeessa.
Faankishiniin gatii yeroo kun gosa gegeedaraa VarType 7 waliin(Guyyaa) fi gatii kana akka sireenya mirree keessaatti gidduu 0 fi 0.9999999999 cimmisi.
Akkuma fankishiniin guyyaa enyummaa fi gatii eenyumaatiin wal falleesse ,yommuu eenyumman gatii guyyaatti guyyaa murtaa'een walitti dhufu,gatii faankishinii gatii yeroo waliin shallaguu ni dandeessa garuu qorachuu hin dandeessu.
Faankishinii yeroo eenyummaa keessatti,ulaagalee garaagaraa dabarsuu dandeessa (Sa'aa, Daqiiqaa, Sekoondii) akka himamsa numeerika garaagaraatti. Fankishinii gatii yerootiif,haata'u malee, diran ulaagalee yeroo of keessatti qabatan dabarsuu dandeessa.
13 Akaakuu wal hin madaale